Goobaha ugu fiican ee lagu hagaajin karo Samsung Galaxy Note 10 + | Androidsis
Manuel Ramirez | | Habee Android, Samsung, Khiyaamada Android
Maanta waxaan ku baraynaa dhammaan goobaha aan ku qasbanahay inaan jaangooyno markaan kubilaabno safarkayaga Galaxy Note 10+ (iyo xitaa Galaxy kale). Taasi waa, waxaad heleysaa taleefankaaga cusub oo diyaar u ah khibrad weyn oo sidaas darteed si buuxda uga faa'iideysta shirkadan weyn ee Samsung.
Tilmaamahan ayaa sidoo kale noqon kara dalbo Galaxy kasta oo leh One UI, inkasta oo ay jiraan goobo gaar ah oo u gaar ah Note10 +, sida ikhtiyaarka ah in la rakibo Dex ama waa S Pen oo ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee taleefanka. Aynu u samayno si aan ugu diyaarinno maalintaada maalin.
1 Cusboonaysii barnaamijyada iyo nidaamka hawlgalka
2 Dhaqaaq Wicitaanada WiFi
3 Beddel codka ogeysiiska asalka ah
4 Firfircoon Dolby Atmos
5 Qalabka La Qabsada
6 Habee ha u carqaladeyn laxankaaga maalinlaha ah
7 Kafee Filterka Iftiinka Buluugga ah iyo Habeenkii Habeenkii
8 Habka adag
9 Isticmaal xallinta WQHD +
10 5 × 6 shabakadda
11 Beddel qaabka nalka Edge
12 Wax ka beddel barnaamijyada Edge Panel
13 Adeegso tilmaam tilmaam
14 Faraha oo leh shidma ultrasonic shaashadda
16 Shaashadda qufulka firfircoon
17 Diiwaanka Amniga ee dukumiintiyadaada iyo waxyaabaha muhiimka ah
18 Habee S Pen
19 Isticmaal Jadwalka Bixby
20 Calan batoonka dhinaca
21 Ku xirnaanta Windows iyo DeX
22 Nidaamka is-hagaajinta
23 Nidaamka dib-u-bilaabid
Cusboonaysii barnaamijyada iyo nidaamka hawlgalka
Waxa ugu horreeya waa inaad tagto dukaanka Android oo aad cusbooneysiiso dhammaan barnaamijyada. Qaar ka mid ah kuwa muhiimka ah ee Samsung ayaa sidoo kale lagu daray. Kadib waxaan tagnaa Settings> Updates oo waxaan dib u eegeynaa qaar ka mid ah firmware cusub oo ay tahay inaan ku rakibno moobilkeena ka hor inta aanan u gudbin qeybaha kale ee qaabeynta.
Dhaqaaq Wicitaanada WiFi
AWaxaan dhaqaajineynaa Wicitaanada Wifi, tani waa waxa loogu yeero Orange wicitaano tayo fiican leh iyo xiriir wanaagsan. Waxaan u adeegsan doonnaa WiFi khibrad soo hagaagtay. Waxaan aadeynaa Settings> Connections> Wicitaanada WiFi.
Beddel codka ogeysiiska asalka ah
Aynu wajahno, ogeysiiska asalka ah ee soo socdaa ma ahan kan ugu fiican. Gaar ahaan loogu talagalay noqo ogeysiis dhowr ilbiriqsi ah marka mid gaaban uu ka fiican yahay. Waxaan aadnay Goobaha> Dhawaaq> Dhageysiga ogeysiiska waxaanan isku daynay mid kayar.
Marka hore waan dhaqaajinaynaa Dolby Atmos oo waayo-aragnimo fiican u leh xagga dhawaaqa kumbuyuutarkeena, ha ahaato ciyaar ciyaar, idaacadaha ku hadla Bluetooth ama gaariga dhexdiisa markaan dhageysano Spotify. Waa farqi weyn.
Xusuusnow inaad awoodid ku hagaaji ciyaarta laga bilaabo Sound> Dejinta codka Sare. Iyo haddii aad rabto xeelado dheeri ah oo ku saabsan codkaaga Galaxy, ha moogaanin kuwan kale muuqaal ahaan.
Si ay dhagahaagu u fiicnaadaan, dejintani waa muhiim. Waxaan leenahay laga bilaabo Advanced Sound Settings> Tayada codka iyo saamaynta> Adapt Sound, barnaamij ayaa la rakibay waxaanan horeyba u isticmaalnay mid ka mid ah saddexda xulasho ee da'da. Isticmaal cabbirka da'daada ka mid ah saddexda ikhtiyaar ee suurtogalka ah.
Habee ha u carqaladeyn laxankaaga maalinlaha ah
Hagaajin wanaagsan ha dhibin saacadaha si aad iskugu darsato laxankaaga nolol maalmeedka. Muddo dheer ku riix marinka tooska ah ee barta xaaladda oo waxaan barnaamij ka dhigan karnaa maalmaha iyo saacadaha la hawlgelinayo.
Kafee Filterka Iftiinka Buluugga ah iyo Habeenkii Habeenkii
Miiraha iftiinka buluuga ah wuxuu wanaajiyaa khibrada daawashada habeenkii. Waa isku mid ayaa ku dhacda habka habeenkii sidaa darteed qaar ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee mobilka ayaa mugdi galaya, sida bar bar (status bar) iyo tuuriyada marka aan balaarinayno. Mawduuc mugdi ah oo dhan isbeddel ah oo waliba ku imaan doona Android 10.
Haddii aad rabto inaad runtii ku raaxaysato shaashaddaada Note10 + AMOLED, waad kari kartaa u isticmaal Habka loo yaqaan 'Vivid Mode' midabbo aad u muuqda iyo inay sii eegaan. Waxaan ka helnaa Settings> Shaashad> Habka shaashadda.
Isticmaal xallinta WQHD +
Inbadan waxay dhahaan ma ogaanayaan farqi, laakiin ciyaaraha sida PUG Mobile pixels badan micnaheedu waa fiiqnaan, iyo fiiqan macnaheedu waa inaad si cad u aragto baaxaddaada. Sidoo kale nooca qoraalka ayaa aad ugu fiiqan akhriska, baloog garaynta, isku xirka, iyo waxyaabo kale oo badan. Laga bilaabo shaashadda waxaan ka beddeli karnaa xallinta.
5 × 6 shabakadda
Taleefan ahaan sida Note10 + oo leh shaashaddaas weyn, weyn. Waxaan ku xulannaa shabakadda tirada ugu badan ee sanduuqyada inaad awood u yeelatid inaad haysatid miiska shaashadda si wanaagsan loo qaabeeyey oo leh barnaamijyo, aalado iyo waxyaabo kale oo badan.
Waxaan u soconaa Dejinta> Muujin> Guri> 5 × 6 Shaashadda Guriga iyo barnaamijyada Apps sidoo kale 5 at 6.
Beddel qaabka nalka Edge
Aan aadno Dejimaha> Muujinta> Muuqaalka Edge> Iftiinka muuqaalka Edge> Habka nalka oo aan dooranno midka aan aad u jecel nahay. Si aan ugu isticmaalno shaashadda geesaha nuxurkeeda, waxaan u qaabeyn karnaa ogeysiisyada midab kale ama saameyn kale si aan uga dhigno kuwa soo jiidasho leh. Oo waxaad had iyo jeer astaysto ogeysiisyada giraan ah ee barnaamij gaar ah loogu talagalay Note10 iyo Galaxy inteeda kale.
Wax ka beddel barnaamijyada Edge Panel
Waxaan u isticmaali karnaa Edge Panel ilaa marin u helka barnaamijyada sida Xisaabiyaha, Faylasha My ama Faydh Ammaan ah oo sidaas ayaanu markasta gacanta ugu haynaa. Waxaan fureynaa guddiga oo waxaan doorannaa barnaamijyada si aan ugu dhigno sida aan rabno helitaan wanaagsan.
Laga soo bilaabo Edge Screen waxaan awoodnaa hel Mawduucyada Edge oo markaa dooro mid ka mid ah barnaamijyada si aad u doorato oo aad ugu habeyso sida aan u jecel nahay.
Adeegso tilmaam tilmaam
Aan aadno Dejinta> Muuji oo dooro Bar Navigation. Halkan waxaan ku xushay tilmaamaha shaashadda oo buuxa, oo waxaan shaqeyneynaa xulashada soo jeedinta tilmaamaha. Hadda waxaan haysan doonaa dhammaan booska shaashadda ee desktop-ka. Ha moogaan tan barnaamijka si loogu meeleeyo tilmaamo badan oo shaashadda ah oo ku saabsan Note10-kaaga taasina waa rasmi shirkadda Samsung.
Faraha oo leh shidma ultrasonic shaashadda
Laga soo bilaabo Xogta Biometric waxaan heysanaa ikhtiyaarka ah inaan isticmaalno faraha faraha iyadoo la adeegsanayo dareeraha Xiinka 'Note10 +' Karaa ku dar ilaa 5 faro oo u qoondee magac ay ku aqoonsadaan farta aan dooranay inaan furno.
Haddii aan aadno shaashadda Qufulka, waxaan leenahay FaceWidgets si loogu daro shaashadda qufulka waa maxay widget-yada kaladuwan sida kalandarka, saacado kala duwan, ciyaaryahan.
Shaashadda qufulka firfircoon
Laga soo bilaabo Shaashadda Qufulka waxaan ka hawlgelin karnaa qufulka firfircoon sidaa darteed sawirada ka muuqda qufulka ayaa isbedelaya markasta oo aan shidno mobilka. Waxaan kala dooran karnaa xayawaanka rabaayadda ah, farshaxanka, nolosha iyo waxyaabo kale oo badan.
Diiwaanka Amniga ee dukumiintiyadaada iyo waxyaabaha muhiimka ah
Laga soo bilaabo Xogta Biometric iyo Amniga waxaa marin looga heli karaa Faydh Ammaan ah. Dhagsii oo galkaas ayaa ka bilaaban doona meesha waad badbaadin kartaa wax kasta oo aad rabto inaad joogtid gebi ahaanba ka hortagga mobilkaaga. Muhiim ah. Si aad u qurxiso, u isticmaal mid ka mid ah farahaaga si aad si toos ah ugu gasho Faydh Ammaan ah marka uu dareeyuhu baaro.
Ha moogaan kuwan 5 khiyaano si aad uga faa iideysato galka aaminka ah.
Habee S Pen
Laga soo bilaabo astaamaha horumarsan waxaan leenahay S Pen. Waan dooran karnaa ka timaadda Waxqabadyada Fog ee dhaca markaynu gujino badhanka ee S Pen, si loo sameeyo kamarad, ama laba jibbaar ah si loogu ciyaaro wadada soo socota marka aan la soconno waxyaabaha ku jira warbaahinta badan.
Isticmaal Jadwalka Bixby
Laga soo bilaabo isla qaybta waxaan haysannaa ikhtiyaar aan ku qaabeyno Jadwalada Bixby iyo in fiidiyow kale aan ku tusinno sida loo qaabeeyo. Waxaan isku hagaajin karnaa cabirro kala duwan isla waqtigaas markii shuruudaha qaarkood la buuxiyo. Shaqo tag, ka hor intaadan seexan, Guriga ... Waxaan xitaa abuuri karnaa howlo noo gaar ah oo ku habboon baahiyaheena.
Calan batoonka dhinaca
Adigoon ka tagin howlaha horumarsan, waxaan gujin karnaa badhanka Side si aan wax uga bedelno ficilka. Halkii laga furi lahaa Bixby, Waxaan soo saari karnaa kamaradda ama furan karnaa codsi. Saxaafadda dheer, waxaan kugula talineynaa Menu Off; sidoo kale waxaad leedahay barnaamijkan si aad ugu xilsaarto ficillo badan.
Ku xirnaanta Windows iyo DeX
Laga soo bilaabo qaybtan waan awoodnaa isticmaal Windows Connection si aad u gasho leh akoonka Hotmail oo markaa ku xir telefoonka, ama isticmaal barnaamijka gaarka ah ee Dex, xilligan, loogu talagalay Note10 + iyo inaan halkan ku sharaxno.
Laga soo bilaabo dayactirka qalabka, haddii aan gujino calaamadaha dhibcaha tooska ah ee 3, waxaan leenahay ikhtiyaari ikhtiyaari ah otomaatig ah. Hal mar maalintii, waqti go'an, dhamaan barnaamijyada ka shaqeeya asalka waa la xirayaa faylasha aan loo baahnaynna waa laga saaraa. Waxaa la samayn doonaa marka shaashadda la xiro adiga oo aan ku dhibin.
Waxaan kicineynaa Dib-u-cusboonaysiinta otomaatiga ah hal mar usbuucii hal habeen, oo sidaas ayaan uga tagnaa sidii hore wuxuu ku bilaabmaa si fiican u fiicnaansho boosteejada
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Habee Android » Dhamaan dejimaha ay tahay inaad ku hagaajiso talaabooyinkaaga ugu horeeya ee Galaxy Note10 + (iyo Galaxy kale)